Vaovao - Fomba hampihenana ny fampiasana harona plastika
Fomba hampihenana ny fampiasana harona plastika
Ampiasao indray ny kitapo plastika: misafidiana harona plastika matanjaka vitsivitsy ary ento mivezivezy ao anaty kitapo ahafahanao miantsena amin'ny kitaponao manokana fa tsy entin'ny magazay.
Mora entina ny kitapo plastika azo ampiasaina (mety ao anaty kitapo kely na paosy mihitsy aza!), Ary raha mitondra vitsivitsy hafa ianao dia afaka mividy zavatra be dia be, nefa koa azo zaraina, koa aza mitondra fanelingelenana amin'ny fiainana. Kitapo plastika maloto no hampiasaina ho an'ny fako (na hosasana sy hampiasaina indray), raha kitapo plastika madio kosa azo ampiasaina imbetsaka.
Tsy misy kitapo plastika: Amin'ny ankapobeny, ny mpamatsy vola dia mazoto manangona sy manangona vola amin'ny fomba mekanika. Tsy nanam-potoana hanontaniany ny mpanjifa izy ireo raha mila harona plastika. Raha tsy izany dia tsy mila mandray kitapo plastika ianao, toy ny rehefa mividy entana madinidinika toy ny yaourt, zava-pisotro, fanafody sns. Iza no milaza fa ny kitapo sy ny kitapo tote dia tsy azo kitapo miantsena? Mampiasà kitapo azo ampiasaina: ento miaraka aminao hatrany ny kitaponao.
Isao hoe firy ny harona plastika nampiasanao: Zahao io! Saintsaino hoe ohatrinona ny harona plastika laninao anio na amin'ity herinandro ity. Lazao amin'ireo namanao sy havanao ireo fomba ireo, mba hahafahan'ny olona maro kokoa mandray anjara amin'ny tontolo iainana.
Raha miantsena amin'ny zavatra marefo toy ny atody ianao, dia fidio harona kely vita amin'ny hazomalahelo, izay sariaka amin'ny tontolo iainana sy kanto. Miantsena anaty kitapo azo ampiasaina indray raha azo atao. Misy koa ny kitapo mena, mavo, manga ary maitso. Ny asan'ireto sakaosy ireto eny an-tsena dia ampiasaina indrindra amin'ny fandaminana ny fako.
Ny fanasivanana ny fako dia tena zava-dehibe ary manampy amin'ny fampiasana fako azo ahodina, ny fako ao an-trano mazàna dia mizara ho fako ao an-trano sy fako azo averina, raha toa ka elektromagnetika fitaratra mampidi-doza izany ary noho izany dia afaka mampiasa ilay kitapo fako mena isika, andao isika handray anjara amin'ny tany
Fotoana fandefasana: Apr-13-2021
U Bolts, Lag Bolts, Masinina Sodina Pipe, Bolt firafitra, Bolts amin'ny kalesy, Hex Bolts,